Steel Strip, Steel xirxirida Strap, galvanized Steel Strip, Iron xirxirida Strip - JinHe Birta
Dubista Blued Steel xirxirida Strap
Dubista Rinji Iron Strap
Galvanized Iron xirayaan
Iron Dabiiciga Strap xirxirida
wax madow Iron Strap
Kaydinta xirayaan Iron
xirayaan Iron waa mid aad u fudud in ay keeni corrosion.What waa in aan ku bixino marka kaydinta xirayaan birta dareenka? 1.When xirayaan biraha la Mire Waqaf, waa in biyo ma waxaysidoo dushiisa. wareegga hawada 2.Beerta waa in lagu hayaa bakhaar meesha xirayaan birta waxaa loo kaydiyaa. rel The ...
Maxay tahay sababta loo ahi.Waxa ah xirxiraan la bundl ...
Maxay tahay sababta loo ahi.Waxa ah in geeddi-socodka lagu cabayn ee? Waa maxay sababta ahi.Waxa ah? Kaalay, i raac si aad u hesho jawaabta: xirxirida suunka waxaa kaloo loo yaqaan xidhmo. Waxaa la sameeyey ka polyetylen, cusbi polypropylene, strip qabow-giringiriyey sida wax ugu weyn ee cayriin, iyo sidoo kale nylon iyo caag. extruded hal hab siligga ...
Gaomi JinHe Birta Products Factory waxa uu ku yaalaa magaaladiisa ee Mo Yan, guusha ee Nobel Prize ee suugaanta adduunka - Gaomi City, Shandong Province.It waa galbeed ee Qingdao (Port Qingdao) iyo bariga magaalada WeiFang . JiaoJi Railway iyo QingYin Expressway gudbaan Gaomi City la meel aad u fiican oo gaadiid ku haboon.
DAR: Cinwaanka: 666 Home qabriga maryo Road, magaalada gaomi, Gobolka Shandong